Kooxaha Southampton iyo Chelsea oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha Southampton iyo Chelsea oo barbardhac ku kala baxay… +SAWIRRO
(Southampton) 20 Feb 2021. Kooxaha Southampton iyo Chelsea ayaa barbardhac 1-1 ah ku kala baxay, kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo ka tirsaneyd kulamada horyaalka Premier League.ay ku wada ciyaareen garoonka St. Mary’s.
Daqiiqadii 33-aad Southampton ayaa hoggaanka u qabatay dheesha kaddib markii uu 1-0 ka dhigay Takumi Minamino, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Nathan Redmond.
54 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool ka dhigay Mason Mount, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay barbardhac 1-1 ah.
Balse ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay barbardhac 1-1 ah oo ay ku kala baxeen labada kooxood Southampton iyo Chelsea, kaddib ciyaar aad u xiiso badan oo ka tirsaneyd kulamada horyaalka Premier League.ay ku wada ciyaareen garoonka St. Mary’s.
Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Southampton vs Chelsea ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey